Ogaadeen baan ahay oo Kililka Shannaad baan u dhashay. Markaa Guryaha (Dawladda) way ku wada jiraan Reer Sheekh Isaxaaq – Murtimaal
Ogaadeen baan ahay oo Kililka Shannaad baan u dhashay. Markaa Guryaha (Dawladda) way ku wada jiraan Reer Sheekh Isaxaaq
05/12/2017 Video News NEWS
Ogaadeen baan ahay oo Kililka Shannaad baan u dhashay. Markaa Guryaha (Dawladda) way ku wada jiraan Reer Sheekh Isaxaaq Akhri xaski uu ka dhintay gudoomiyihi hore baanka somaliland oo qasab lagaga saarayo Gurigeedi.
Hargeysa(murtimaal.com)-Amran Maxamed Suldaan Xuseen Aabi oo ah Xaaskii uu ka Geeriyooday Alle ha u naxariistii Guddoomiyihii hore ee Baanka dhexe ee Somaliland Cabdiraxmaan Ducaale, ayaa sheegtay in Dawladdu u qabatay inay muddo 10 Maalmood Gudahood ah kaga baxdo Gurigii ay ku jireen iyada iyo Carruurtii uu ifka kaga tagay Cabdiraxmaan Ducaale, kaasi oo ku yaalla degmada Ibraahim Kood-buur ee Magaalada Hargeysa.
Previous Post:Daawo Layla Faarax Shirdoon oo ah gabadh Ay ilmaadeer labaad yihin Farmaajo oo ka shiftay Marwada Madaxwaynaha Somaliya iyo awoodaheeda qarsoon
Next Post:Daawo Dayax Dalnuurshe oo soo bandhigay sawirada xaaskisa oo bishi shanaad ku jirta